Mkpụrụ osisi sịntetik na-adọrọ adọrọ gụnyere usoro dị iche iche nke ihe ndị dị n'ime kristal
Ọ bụghị ụdị quartz niile na-ewere ọnọdụ dị ka ọghọm. N'ihi na kristal eke na-ejikarị agbatị, a na-emepụta quartz roba maka iji ya na ụlọ ọrụ. A na-agwakọta kristal buru ibu, nke na-enweghị ntụpọ, otu mkpụrụ osisi na autoclave site na usoro hydrothermal
Quartz sịntetik gụnyere usoro dị iche iche nke ihe dị iche iche sitere na mmiri ọgwụ ọkụ dị elu na nrụgide dị elu, a na-akpọkwa usoro hydrothermal, hydrothermal bụ nke sitere na geologic. Ndị ọkà mmụta banyere ala na ndị na-egwupụta ihe omụtala ụzọ hydrothermal quartz equilibria kemgbe mmalite nke narị afọ nke iri abụọ.
Ntinyeko nke Hydrothermal
Enwere ike ịkọwa njikọ hydrathermal dị ka usoro njikọta nke kristal na-adabere na solubility nke mineral na mmiri ọkụ n'okpuru nrụgide dị elu. A na-eme uto kristal nke quartz na ngwa nke nwere arịa nrụgide nchara a na-akpọ autoclave, ebe a na-enye ya nri na mmiri. A na-ejigide ọkwa ngwa ngwa n'etiti akụkụ ndị ọzọ nke ụlọ uto. Na njedebe dị ọkụ karị, edozi ahụ na-agbaze, ebe na njedebe nju oyi ka edobere ya na kristal mkpụrụ, na-eto kristal achọrọ.
Uru nke quartz hydrothermal synthetic
Uru nke hydrothermal usoro karịa ụdị ndị ọzọ na-eto kristal gụnyere ikike ịmepụta usoro dị egwu nke na-akwụghị chịm n'oge agbazekwa. Ọzọkwa, ihe ndị nwere oke nrụgide dị elu na ebe ha na-agbaze nwere ike ịmalite site na usoro hydrothermal. Iszọ ahụ dịkwa mma maka uto nke kristal klọọkụ dị mma ma na-ejikwa njikwa ha. Ihe ọghọm nke usoro ahụ gụnyere mkpa nke autoclaves dị oke ọnụ, yana enweghị ike ilele kristal ka ọ na-eto ma ọ bụrụ na ejiri ọkpọ ígwè. Enwere Autoclaves nke emere site na iko nwere mgbidi, nke enwere ike iji ruo 300 ° C na Ogwe 10.
AKOLKỌ: Enweghị agba site na agba dị iche iche na agba ojii
MGBE AHỤ AHỤ: 1.54 ka 1.55
AKW BKWỌ AKWXKWỌ: + 0.009
AKW SPKWỌ AKW SPKWỌ PECTA: 2.59 – 2.65
Akụkọ ihe mere eme nke quartz
Akuko mbu nke uto hydrothermal nke kristal sitere na onye omumu ihe omuma nke German Karl Emil von Schafhäutl (1803 – 1890) na 1845 o toro kristal microscopic na osi ite.